Infeksiya, Spyware və Malware Təhlükəsizlik Kılavuzu haqqında Semalt Ekspert
Yintoni abantu ababhekisela kuyo njengeHarasi yeTrojan okanye nje iTrojan ayi-malware, eyenza ukuba yinto enyanisekileyo yokukhohlisa umsebenzisi ukuyilayisha. Ingathatha ifom yomdlali weendaba, ifayile efakwe kwi-imeyile, iphepha lewebhu okanye isicelo se-smartphone. Abasebenzisi banokufumana ulwazi oluqinisekisileyo, olwaneleyo ukuba luyivule, okwenza ukuba kubekho i-malware. I-Trojans inokuthatha ifom yefayile. Basenokuziqhayisa njengeifayile zemifanekiso, amaxwebhu eofisi, iifayile ezivakalayo okanye imidlalo ye-intanethi.
U-Julia Vashneva, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-10 (Semalt , uthi kukho iinkalo ezimbini phakathi kweTrojans kunye ne-virus okanye iimbungu - kiralık sunucu. Kwimeko yeTrojans, abanalo ukukwazi ukuziphendulela okanye ukusabalalisa njengemigudu okanye iimbungu. Okwesibini, abaphuhlisi babo beza kunye nabo ngenjongo enobungozi ngelixa iipilisi kunye neepombu ziba ngengozi okanye ziphazamisekile.
Yintoni eyenziwa yiTrojans
Njengoko kuphawuliwe ngasentla, iTrojans inokuthatha iifom ezahlukeneyo, kwaye inakho ikhowudi eyenza bakwazi ukukwenza malunga nantoni na kwikhompyutha. Zisetyenziselwa ukuqala xa umsebenzisi ebuyisela ikhompyutha. Emva kokufakiwe, kudala ukungena kumsebenzisi odeleyo, ngokuqhelekileyo ku-cyber-criminals, kwinkqubo ebanika ukulawula ikhompyutha. Kungabangela ukukhishwa komnini. Zonke ezi zenzo zihamba ngokuthula kwaye zifihlakele. Basenokukhubaza inkqubo yokulwa ne-virus ngaphandle kolwazi lomsebenzisi.
Ezinye zeTrojans ezikhoyo zifake ii-keyloggers, ezenza njenge-spyware eziqwalasela imisebenzi yomsebenzisi kwibhodibhodi, iliso ekusebenziseni i-intanethi, kwaye iqokelele ulwazi lomntu .Abanye bavumela ukufakwa kwesoftware ye-botnet, edibanisa ikhompyutha kunye nezinye iikhomputha ze-zombie ezilawulwa ngabahlaseli.Ii-Botnets zinemisebenzi eninzi eneenjongo. Zingakwazi ukuhlaselwa kweDDoS (Distributed Denial of Service) ukudala i-website jam, ukudala i-imeyli yogaxekile, ukukhwabanisa izikhalazo, okanye ukweba iziqinisekiso zokungena ngemvume kunye neephasiwedi. 8)
Isixhobo esona siqhelekileyo sokufakela kweTrojan sihamba ngokulandwa. Yintoni eyenzekayo kukuba abo bahlaseli batshintsha ikhowudi yewebhusayithi ukukhuphela i-malware nanini na ukuba umsebenzisi uyityelele ngokuzenzekelayo. Ukuba i-akhawunti yomsebenzisi inamalungelo okuguqula isofthiwe, xa ikhuphela iTrojan, ngoko iya kuzifaka ngokuzenzekelayo.
Iifowuni zeqela lesithathu zikhonza njengeendawo eziqhelekileyo apho abahlaseli bafihla iTrojans. Benza njengabathengisi abanikela ngeenguqulelo ezincinci zezicelo zeselula. Ngaphambi kokulanda nokufaka isicelo, abasebenzisi kufuneka bahlaziye iimboniselo kunye neemvume ezenza izicelo zesofthiwe. Iimveliso ze-Apple mhlawumbi zikhuselekile ngaphandle kokuba umnini "akaphuli".
I-Trojans inzima kakhulu ukuyijonga. Ukuba umntu uyakrokrela ukuba khona kwayo kwinkqubo yabo, kufuneka basebenzise "ipakethi yefakeli," ehlalutya zonke izithuthi ezinxulumene nenkqubo ngelixa bekhangela nayiphi na intetho yonxibelelwano kunye namaseva abanjelwa phantsi kolawulo lwe-cybercriminal. Nangona kunjalo, kukho iinkqubo ezithile ezichasene neentsholongwane ezaneleyo zokususa amaTrojans.
Ukukhusela izifo zeTrojan
Okokuqala, qulunqa i-akhawunti yomsebenzisi ukuba isebenzise kuphela amalungelo ayo okulawula kwiimeko ezinqabileyo. Kwakhona, kufuneka banciphise amalungelo okufaka okanye ukuhlaziya isofthiwe. Sebenzisa ii-akhawunti ezilinganiselwe kuzo zonke ezinye izinto ezibandakanya intanethi, njengoko abanako ukuguqula izicelo.
Okwesibini, qinisekisa ukuba umlilo usebenza ngamandla kuwo onke amanxibelelwano asekhaya. Uninzi lweenkqubo zokusebenza zifake izixhobo zokutshisa umlilo, ngokunjalo kunye nee routers ezingenantambo. Ekugqibeleni, isofthiwe ekhuselekileyo yokhuselo lwegciwane lesandulela ngculaza eqhuba izicwangciso eziqhelekileyo inceda ukukhusela iintsholongwane. Njalo qinisekisa ukuyihlaziya rhoqo.